Warbixin: Macalinka xulka SPain Vicent Del Boqsue oo u saadaaliyey in xulkiisa ay hanan karaan koobka Euro 2016 ka. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Macalinka xulka SPain Vicent Del Boqsue oo u saadaaliyey in xulkiisa ay hanan karaan koobka Euro 2016 ka.
Warbixin: Macalinka xulka SPain Vicent Del Boqsue oo u saadaaliyey in xulkiisa ay hanan karaan koobka Euro 2016 ka.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-06-16 3:50 PM Hogaamiyihii hore ee kooxda Real Madrid ahna macalinka xulka dalka Spain Vicent Del Bosque ayaa hoosta ka xariiqay in xulka dalkiisa ay kamid yihiin xulalka loo saadaalinayo hanashada koobka Euro 2016 ka.
LA Roja ayaa tageysa dalka France iyada oo difaacaneysa koobka qaramada qaarada, wallow midkii kasii horeeyey midkan ay sidoo kale soo hanatay waxaana lagu tirinayaa xagaagan xulalka ugu cad cad hanashada koobka Euro 2016 ka.
Vicent Del Bosque ayaa soo dhaweeyey iney usoo baxeen koobkan xilli uu filanyo iney xulka dalkiisa hanan karaan wallow uu sidoo kale ka dhawaajiyey iney jiraan xulal aan la dhayalsan karin.
“Anaga waxaan ku jirnaa qaab wanaagsan, waxaan kamid nahay xulalka u sharaxan ku guuleysashada koobka wallow ay jiraan xulal kale oo loo saadaalinayo hanashada koobka, waxaan nahay difaacadayaasha koobkan” Bosque ayaa sidaas warbaahinta u sheegay.
“Riyadeena ugu weyn waa sidii aan ku hanan laheyn markii sedexaad koobka qaramada qaarada Yurub, waxaanse ku rajo weynahay inaan hanan karno koobkan” ayuu hadalkiisa kusoo afmeeray.
Waxaa xusid mudan in xulka lagu naaneeso La Roja uu kulankiisa furitaanka la ciyaari doono xulka Czech Republic 13 ka bishan eynu ku jirna ee June.